Ryan Gosling sy Eva Mendes miaraka amin'ny ankizy sambany vao tratran'ny fakantsarin'ny paparazzi
Ny iray amin'ireo mpivady indrindra ao amin'ny Hollywood, Ryan Gosling sy Eva Mendes, dia mahalana manoloana ny lamin'ny mpanao gazety. Ary noho izany, omaly, ireo mpilalao paparazzi malaza dia afaka nanamboatra ny fakantsariny rehefa nandao ny trano izy ireo ary nandeha nitsidika ireo ray aman-drenin'i Ryan. Ny fisehoan'ny sary Gosling sy Mendes tao amin'ny aterineto dia nahatonga adihevitra nipoitra, satria maro no nihevitra fa bevohoka tamin'ny zaza fahatelo i Eva.
Eva Mendes sy Ryan Gosling
Reny ray aman-dreny manan-janaka roa
Nandritra ny fotoana lava dia nafenin'i Mendes sy Gosling tsara ny zanany tamin'ny mpanao gazety. Na eo aza izany, ny olo-malaza farany dia tsy nanafina ny zazakely ary ankehitriny ny rehetra dia afaka mahita hoe iza ireo tovovavy ireo. Ny famotsorana ireo mpilalao Hollywood dia tena tsy nampoizina ho an'ny gazety vahiny. Afaka naka sary vitsivitsy i Paparazzi, nefa ampy ny handinika ny fianakaviana kintana amin'ny antsipiriany. Noho izany, Ryan dia nanao akanjo lava mainty maitso, T-shirt maivana, akanjo jiro manga miaraka amin'ny printy Nasa sy kiraro mavo. Eo amin'ny lohany, toy ny mahazatra, Gosling dia nahita bobaka baseball mainty.
Eva sy Ryan miaraka amin'ny ankizy
Ho an'ny vadiny, Eva koa dia naneho fomba tsy dia lafo amin'ny akanjo. Tao amin'ilay vehivavy dia afaka nahita tehamaina teo amin'ny fehiloha ambany sy loko manga amin'ny volom-bolamena mena. Ho fanampin'ireo fitaovana fanampiny, ny mpilalao sarimihetsika sy ny mpamorona dia tsy lasa mpidoroka amin'ny endriny, mitafy jiro eo amin'ny tarehiny, ary mihantona kitapo manga misy manga matevina eo an-tsorony.
Ary ankehitriny dia te-hiteny teny vitsivitsy momba an'i Esmeralda 3 taona aho ary Amanda iray taona sy tapany. Ny zanakavavin'i Eva sy i Ryan dia nanao akanjo tsara tarehy. Ao amin'ny ankizivavy efa zokiny dia mahita sarafan ny voninkazo mainty sy fotsy, ary eo amin'ny tanora kokoa ny hatsembohana manga sy ny manga manga amin'ny mason-tsarimihetsika maingoka.
Nanomboka namana i Emma Stone niaraka tamin'ny fisehoan'i Ryan Gosling
Ny mpampiasa aterineto dia niahiahy an'i Mendes tamin'ny fitondrana vohoka
Taorian'ny niparitahan'ny saripika miaraka amin'ireo Hollywood fanta-daza ao anaty gazetiboky an-tserasera, maro ireo mpampiasa tambajotra sosialy no nanisy fiheverana fa i Eva dia voaravaka akanjo marevaka. Vetivety teo, ireo mpankafy an'ity mpivady mahatalanjona ity dia nanana hevitra fa niandry ny zaza fahatelo i Mendes. Ireto misy soso-kevitra vitsivitsy momba io lohahevitra azonao vakiana ao amin'ny Internet io: "Matetika ny Mendes dia manao akanjo kely hafa. Ankehitriny dia manana akanjo maimaim-poana izy. Angamba be bevohoka izy? "," Amin'ny ankapobeny, Eva dia manana fomba ivelany hafakely. Manana hevitra toy izany aho fa mitondra eo ambany fon'ny zaza. Faly aho raha nanan-janaka izy ireo. "" Fomba demokratika ankehitriny izany, saingy tsy tiako loatra ity akanjo ity. Tsy mifanaraka amin'ilay sary izany ary tsy mazava ny endrika Form ankehitriny. Angamba natao izany mba hanafenana ny vola fanampiny, ary angamba mba tsy hamoahana ny maha-bevohoka azy ", sns.
Ry ray aman-drenin'i Anton Yelchin
Blond Kim Kardashian nikarakara fampirantiana tarehim-bolamena
Tany Los Angeles dia nanome ny loka ho an'ny safidin'ny olona 2016
Ciara sy Russell Wilson dia tonga ray aman-dreny ary nizara fotoana nahafinaritra niaraka tamin'ireo mpankafy!
Ashley Graham nanazava tamin'ireo mpankafy hoe nahoana izy no manao fanatanjahantena, raha tsy mandany vola izy
Mpifanaraka tonga lafatra: Irina Sheik sy Bradley Cooper amin'ny Met Gala 2018
Sakafo avy amin'ny aty
Trano fantsona misy rano mafana
Vovon-tany mineraly ho an'ny hoditra
Sekolin'ny sekoly ho an'ny kilasy kilasy 5-11
Amin'ny vanim-potoana inona no azonao ampiasana ny mpandeha?
Ny vokatra Mozart
Decoupage an'ny tavoahangy vaovao taona
Glue amin'ny laminasa
Fonosana Bamboo eo afovoan-trano - akanjo maoderina miaraka amin'ny fitaovana ekolojika
Na azo atao ny mamelona kafe kafe?